Ukugqwesa kwiintaba zeGaltee
Intente sinombuki zindwendwe onguBryce
Indawo yethu ebanzi engama-21 ft ibekwe kwiiNtaba zeGaltee ngokukhwela intaba kunye nokuhamba ngebhayisekile emnyango wakho. I-yurt inesitovu somthi, iti / ikofu, itoaster, imicrowave, ibbq, ifriji, istiriyo, iincwadi, imidlalo kunye nomdlali wedvd. I-Continental b'fast ye-2 ibandakanyiwe kwixabiso. Iibhayisekile ezimbini eziqhelekileyo ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe okanye zingekho endleleni/iibhayisekile zombane ezinamafutha zingaqeshwa nge-Euro eyi-30 nganye. Ukutya kwangokuhlwa nako kunokulungiselelwa. Nceda ujonge olunye uluhlu ukuba indawo yokuhlala engaphezulu iyafuneka.
Iyurt enomoya enebhedi yesofa eyahlukileyo kunye nebhedi ephindwe kabini. Izibonelelo zeti/ikofu kunye netoast zibonelelwa, kwakunye neebhafu kunye neetawuli. Isidlo sakusasa sase-Continental sibandakanyiwe. I-yurt inenkqubo yomculo epheleleyo kunye nomdlali we-dvd kunye nokukhethwa kweefilimu. I-bbq kunye ne-microwave ziyafumaneka kwiindwendwe, okanye isidlo sangokuhlwa sinokulungiswa ngesicelo. I-intanethi ye-Wifi iyafumaneka kwipropati kodwa asiyiyo eyona ikhawulezayo okanye eyona ithembekileyo.Sinezibhayisekile eziqhelekileyo owamkelekileyo ukuba uzisebenzise, kwaye sinazo ezinye 'itayara elityebileyo' kwiibhayisekile zombane zendlela onokuthi uziqeshe nge-€30 nganye. Nceda undazise ngaphambili ukuba ungathanda ukuqesha iibhayisekile zombane kwaye ndingakubambela zona.
Ndikwaqhuba ukhenketho lwe-airbnb 'lwamava' apho sikhwela ibhayisekile kwaye sikhwela intaba kwiiGaltees....
Ukutya kwangokuhlwa nako kunokulungiselelwa. Sikwanayo nelori eguquliweyo yendawo yokuhlala, ukuba kufuneka iibhedi ezininzi. Nceda ubone olunye uluhlu.
4.92 ·Izimvo eziyi-493
4.92 out of 5 stars from 493 reviews
4.92 · Izimvo eziyi-493
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi493
Iintaba zeGaltee zezona ntaba ziphakamileyo eIreland. Ukuhamba ngeenyawo okuninzi, okufutshane okanye okude kanye kumnyango wethu. Imiqolomba yaseMitchelstown iku-10min kude kunye nehlathi laseBallyhoura, elaziwa ngeendlela zokukhwela ibhayisekile entabeni yi-20min drive. Ilali yaseKilbehenny ikumgama ozimizuzu emi-5, iMitcheltown iku-10min kude kwaye isixeko saseCork sihamba nge-45min.
Iwebhusayithi ye'munstervales' yindawo entle yolwazi kwindawo yasekhaya kunye nakude.
Umfazi wam uDeirdre unegalari yobugcisa kwindawo yokubukela kunye nokuthenga imizobo kunye nokuprintwa
Izimvo eziyi-1 131
Sihlala kwindawo kwaye sihlala sifumaneka ngeengcebiso malunga nokuhamba kunye nezinto eziluncedo zasekhaya.